बढ्दै कोरोना संक्रमण, छैन सावधानी - Tanahun Awaj
Home समाचार	बढ्दै कोरोना संक्रमण, छैन सावधानी
22nd April 2021 22nd April 2021 10 views
दमौली/कोरोनाको दास्रो लहर नेपालमा आक्रामक ढंगले आएको छ । तर सरकार तथा नागरिक स्तरबाट अपनाउनु पर्ने सावधानी भने अपनाएको देखिएको छैन ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा कोरोनाका दुइ ?पह? खतरनाक?पमा देखापरेका छन् । यसकै संक्रमणको डर देखिएपछि सरकारले काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै महानगर तथा नगरपालिकाका शिक्षण संस्थाह? बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बिराटनगर, बीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका तथा इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगर पालिकाका शिक्षण संस्थाह? पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै मेचीनगर, दमक, विर्तामोड, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धार्थनगर, विरेन्द्रनगर र भीमदत्त नगरपालिकाका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाह? बैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो साताको संक्रमण दरलाई हेर्ने हो भने परिस्थिती भयावह वन्दै गएको प्रतित हुन्छ । आइतबार एकहजार ९६ जना संक्रमित भएकामा सोमबार त्यो संख्या बढेर एकहजार दुइसय ८१ पुग्यो । मंगलबार १६ सय ६७ जना कोरोना संक्रमित थपिए भने बुधबार नौ हजार छ सय ४७ जनामा गरिएको परिक्षणमा २३ सय ५१ जनामा संक्रमण पुष्टी भयो । निको हुने दर घटदै गएको छ भने बुधबारको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा संक्रमण दर २४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
सरकारले आम नागरिकलाई सचेतहुन आग्रह त गरको छ तर जुन गम्भीरता संक्रमणलाई लिएर हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । होटल तथा रेष्टुरण्ट विहान ८ बाट सांझ ८ सम्म मात्र खोल्न पाउने भनिएपनि त्यसका अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र बनेको र त्यसले काम गरको देखिएको छैन । सार्वजनिक यातायातमा सावधानीका कुनै उपायह? अपनाएको नागरिकले देखेका तथा अनुभव गरेका छैनन् ।
नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगिन ५ जना भन्दा बढी भेला नहुन आदेश दिने सरकार नै विभिन्न ठूला सभा र समारोह आयोजना गर्दैछ । नागरिक स्तरमा पनि गतवर्ष संक्रमण सु? हुँदाको समयको जस्तो सजगता देखिएको छैन । छिमेकी भारतमा दैनिक लाखौंको संख्यामा संक्रमित थपिने र हजारौंको संख्यामा मृत्यु हुने गरको समाचार पढेका नागरिकमा आफ्नो तर्फबाट हुनपर्ने सचेतता नहुनुले संक्रमणको खतरालाई बढाएको छ ।